Kuronga kubatwa chibharo kwevana: Bhizinesi rinobhadhara rekushanya kune aimbova musoja weIsrael
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kuronga kubatwa chibharo kwevana: Bhizinesi rinobhadhara rekushanya kune aimbova musoja weIsrael
Kuputsa Israel Nhau • Kuputsa Portugal News • Kuputsa Spain Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • Hurumende Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vashanyi vanoenda kuColombia kazhinji loo0king yezvinodhaka uye kubata chibharo vana. Iri idivi rakasviba kwazvo rekushanya.
Kubatwa chibharo nekutengeswa kwevana zvakapararira munzvimbo zhinji dzepasi, kusanganisira Colombia.
Mumwe aimbova musoja weIsrael aidiwa neColombia nekutengesa zvepabonde, kusanganisira vana vadiki, akasungwa muPortugal sekureva kwemapurisa eSpain, ayo akapinda muchiitiko ichi.
Mushure mekumutevera muIbiza neBarcelone, mapurisa akasunga Assi Moosh, makore makumi mana nemasere, padhuze neLisbon neChitatu aine mapepa ekunyepedzera ekuIsrael, mapurisa eSpain Guard Civil akataura muchitauti.
Anopomedzerwa kuti akashanda "hotera-yakaita-se" hotera muTaganga, musha weColombia wekuredza uyo wakave unofarirwa nevashambadzi nevashanyi. Pahotera vakadzi vechidiki nevasikana vasati vabva zera vaishungurudzwa pabonde.
Vakuru veColombia vakadzinga Moosh - uyo midhiya yemuno yaimudaidza kuti "Dhiyabhorosi weTaganga" - mu2017 nekuti aionekwa semunhu anotyisidzira runyararo.
Mushure mekumudzinga, Colombia yakapa gwaro rekusungwa repasi rose kwaMoosh kuburikidza neInterpol yekutengesa zvinodhaka, kubiridzira mari nekutengesa vanhu nechinangwa chekubata chibharo.
Muna Zvita mapurisa eColombia akazivisa kuvhiyiwa kurwisa rin'i yekubata chibharo Moosh anofungidzirwa kuumba. Vatatu veIsrael nevaColombia vaviri vakasungwa mukubaya.